ISamsung isivele ikhiqiza isikrini esingu-120 Hz OLED se-iPhone 13 | Izindaba ze-IPhone
Ngokuya ngomkhakha wamahemuhemu, okusha iPhone I-13 izothola ushintsho oluncane ezingeni lobuhle, okusho ukuthi, luyoba yibanga le- «S» ledivayisi yamanje, i-iPhone 12. Noma sinokungabaza ngokusetshenziswa kwe inombolo yedemoni Uma kukhulunywa ngokuqamba uhla olusha lwamadivayisi, ngabe azoba nenkolelo-ze e-Apple?
Kodwa-ke, ngaphansi kwegobolondo kuzoba nezindaba. AbakwaSamsung kubukeka sengathi baqale ukukhiqiza amaphaneli we-iPhone 13 OLED azofaka phakathi amanani wokuvuselela ayi-120Hz. Isici abasebenzisi abaningi abebesifuna isikhathi eside nakanjani kubonakala ngathi siza ku-iPhone.
Ubuchwepheshe I-ProMotion Njengoba i-Apple ikubiza kanjalo, kubonakala sengathi nakanjani kuzokweqa kusuka ku-iPad Pro kuye ku-iPhone. Naphezu kwakho konke, siyakukhumbuza ukuthi i-Apple ayenzi noma iyiphi ingxenye yayo noma cishe ayikho, futhi ngemuva kokuphakama nokwehla okuningi, abakwaSamsung sebengabakhiqizi abakhulu noma abacishe babe ngabakhethekile bamaphaneli we-OLED afaka amadivayisi wenkampani yeCupertino ube nalobu buchwepheshe. Ngokusobala, i-Apple inqume ukubheja nakanjani amazinga wokuqabula ayi-120 Hz nawo-panels we-iPhone, into osuyisebenzisile kunzima ukuyikhohlwa. Ngokusho komhlaziyi uMing-Chi Kuo, isinqumo sesithathiwe futhi inkampani yaseNingizimu Korea isiqalile ukukhiqiza ukuhlangabezana nesidingo se-iPhone 13 yesikhathi esizayo.
Lokhu kungahle kuhambisane nezinye izinto ezintsha ezinjengoshintsho oluncane kumoduli yekhamera ngisho nasenzwa "macro" ebonakala ngathi isivele ifakiwe kwi-iPad Pro kusukela ngo-2021. ukukhweza isikrini esingu-120 Hz, yize iningi lazo livame ukubheja kumapaneli e-LCD ukunciphisa izindleko. Yebo kunjalo, Akufanele ukhohlwe ukuthi amaphaneli we-120 Hz anokusebenzisa okuphezulu kwebhethri, uzimisele ukukhokha leyo ntengo?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Izaziso » ISamsung isivele ikhiqiza isikrini se-iPhone 120's 13 Hz OLED